Siyaasa Itoophiyaa: Rakkoon nageenyaafi qabiinsi mirgoota namoomaa Oromiyaa maaliif ‘hadhaba’ keessaa hin ba’amne ta’e? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSiyaasa Itoophiyaa: Rakkoon nageenyaafi qabiinsi mirgoota namoomaa Oromiyaa maaliif ‘hadhaba’ keessaa hin ba’amne ta’e?
Itoophiyaa keessatti wantoota komiifi qeeqa guddaa kaasan keessaa tokko qabiinsa mirga namoomaati. Waggoota lama dura erga mootummaan jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti bu’uuressuuf onnadhe jedhu aangoo qabatee asitti hidhaafi dararaan ni dhaabbata yookiin ni hir’ata abdiin jedhu biyya keessaafi alaallee tureera.
(Garuu maqaatu jijjiirama malee haalli hidhaa fi ajjeechaa inumaa isa duraa caaleera jedhu miseensa koree hoji-raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo kan ta’an Aab Mikaa’el Booran.
Gama biraan Naannoo Oromiyaatti Abbaa Alangaa Itti Aanaa kan ta’an Aab Nageessaa Oddoo Duubee mootummaan amma jiru akka isa kanaan duraa ta’e jedhee seera ittiin lammiilee dararan baasee hojjechaa hin jiru jedhu.
Haala qabiinsa mirga namoomaa fi nageenya Oromiyaa irratti keessummoota lameen kanneen dubbisneerra.
Qabiinsa mirga namoomaa—Oromiyaatti
Itti-Aanaa Abbaa AlangaaOromiyaa kan ta’an Obbo Nageessaa Oddoo Duubee Ji’a Eblaa bara 2018 irraa eegalee haalli qabiinsa mirga dhala namaa fi dararaan namarra ga’aa ture jijjiiramee fooyya’iinsi argameera jedhan.
Mootummaan akka kanaan dura itti yaadee seera ittiin mirga namaa sarban baasee hojjechaa hin jiru kan jedhan Aab Nageessaan,’’Garuu qaamonni sadarkaa garaagaraa irra jiran, aanga’oonni mootummaa, qaamoleen nageenyaa akka dhuunfaatti mirga namaa sarbaa jiraachuu malu.Garuu akka mootummoota duraanii itti yaadamee tarsimoodhaan kan raawwatamu miti’’ Jedhan.
Seerrii fi heerri wabii mirga namoomaa jiraatus haala garaagaraa keessatti namoonni mirga dhalaa sarban jiru jedhan Aab Nageessaan.
Miseensi koree hoji-raawwachiistuu Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) Obbo Mikaa’el Booran, ammas taanaan humni nageenyaa bakkumatti tarkaanfii barbaade fudhachaa jira waan ta’eef sirna duraan turerraa adda miti jedhan.
Ajaja mootummaan gubbaa kennuun osoo hin taane tarkaanfii namonin dhuunfaa fudhataniin mirgi lammiilee sarbamaa jira isa Obbo Nageessaan jedhanirratti Obbo Mikaa’el wayita yaada kennan,’’Yoo namoonni dhuunfaa mirga lammiilee sarbaa jiraachuunsaanii hubatame maaliif mootummaan gabaasa Amnastii Intarnaashinaal dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa irratti baase morma?
Maaliif namota yakka raawwatan seeratti hin dhiyeessu? Wayita yakkamtoota seeraan gaafatu argaa hin jirru,’’ jedhan.
Waggoota dheeraaf biyya ambaa wayita turanitti dhiittaa mirga namaa yaaddessaa ta’e taajjabaa turuusaanii kan dubbatan Obbo Mikaa’el, ‘’mootummaan Itoophiyaa wayita akka biyya galluuf nu affere gara jalqabaa qalbii uummataa hawwachuuf jecha waan hedduu godheera. Dirree siyaasaa bal’isuufi hidhamtoota hiikuun isaan ijoo turan.
Garuu haala amma keessa jirru yoo ilaallu isa duraa kan caaluudha.
Dararaa fi hidhaan hammaateera,’’ jedhan.
Jaarmiyaalee dubbiin mirga dhala namaa isaan ilaallatu keessaa tokko kan ta’e Abbaa Alangaa Oromiyaatti dabalamuunsaanii dhiyeenya kana ta’uu dubbatan Aab Nageessaan,’’Yeroo gabaabaa kana keessatti hangan beekutti qaamoleen dhiittaa mirga namoomaa raawwataniin himataman jiru. Kan adabamanillee jiru.
Garuu miidiyaarra waan hin baaneef waan gaafatamaa jiran hin fakkaatu. Ammallee waan kanarratti hojjechaa jirra. Qaamolee nageenyaa yakka raawwatan keessaa kan himataman akkuma jiran kan hin himatamnellee inuma jiru. Isaan himatamuu qabu. Kun hanqina’’ jedhan.
‘’Dhiittaa mirga namoomaarratti eeruun yoo jiraate hawaasi nuun ga’uu danda’a. Jaarmiyaaleen idil-addunyaa kanneen akka Amnastii Intarnaashinaal yoo gabaasa baasan ammoo itti adeemnee qoranna’’
‘’Adeemsa seeraan himachuu malee, reebuufi ajjeesuun seeraan ala’’
Namni tokko yoo yakka raawwate adeemsa seeraa(due process of the law) eegee gaafatama malee reebuu fi kabaja isaa gadi buusuun sirrii miti kan jedhan Aab Nageessaa Oddoo Duubee,’’Garuu yeroo adeemsi sirna seeraa kun itti cabu jira. Garuu sirrii miti. Nama nama ajjeese harkaa fi harkatti yoo qabdeyyuu adeemsa seeraa keessa darbee gaafatamuu qaba.
Qaamni nageenya eegsisuuf ba’e tokko yakka yoo namarratti raawwate haalli inni keessatti raawwate ilaalamuu qaba jedhan Aab Nageessaan.
‘’Adeemsa seeraa osoo hin kabajin yoo ajjeesa, reeban itti gaafatamuu qabu. Dirqama kanammoo mootummaan ba’eeramoo hin bane kan jedhu adeemsa keessa kan ilaallu ta’a.’’ jedhan.
‘’Mirga namoomaa mootummaa qofaa miti kan sarbaa jiru’’
Tibba darbe gabaasi Amnastii intarnaashinaal baase bakka dhaloota kiyyaa kan taate Gujii irratti kan xiyyeeffate ture kan jedhan Aab Nageessaan,’’achi keessatti mirga namoomaa mootummaan sarbaa jira, garuu mootumaa qofaa miti kan sarbaa jiru. Mootummaan sarbuu qaba jechaa hin jiru. Mootummaan qaamolee hidhatanii lolaniin walqixxaachuu hin qabu. Garuu qaamoleen hidhatanii dhiittaa mirga namoomaa raawwatanillee itti gaafatamuu qabu,’’ jedhan.
‘’Kan gama mootummaatiin jiru ni qoranna. Namoota yakka raawwatan seeraan ni gaafanna. Mootummaan qaama mirga mirga dhala namaa raawwate seeraan hin gaafatu taanaan ofii gaafatama. Garuu mootummaa caalaa kanneen hidhatanii socho’antu mirga dhala namaa sarbaa jiru.’’
Godinaalee Oromiyaa, Gujii fi Wallaggaa, keessatti qaamoleen hidhatanii socho’an kanneen mirga dhala namaa sarban seeraan to’achuuf humnaa ol nutti ta’aniiru kan jedhan Aab Nageessaan qaamni nageenyaa mootummaalee akka bobba’ee miidhaa geessisuuf kan haala mijeesse isaani jedhan.
Gama biraan miseensi koree hoji-raawwachiistuu ABO Obbo Mikaa’el Booran,’’uummanni hidhattoota mootummaatu nu saamaa, nu ajjeesaa fi nu hidhaa jira jedhanii nutti himaa jiru waan ta’eef eenyu akka mirga namaa sarbaa jiru beekamaadha.’’ Jedhan.
‘’Kaleessas ta’e har’a waraanni biyyaa meeshaa siyaasaati. Mootummaa kana nan jijjiira jedhee waadaa seenus hin jijjiirre. Waraannii fi poolisiin seeraa ol ta’anii uummata hiraarsaa jiru, ajajaa fi murtii mana murtii qaamolee nageenyaatu diigaa jiru’’ jedhan Obbo Mikaa’el.
Isa Aab Nageessaan qaamoleen mirga namaa sarban hunduu qoratamanii seeraan gaafatamu jedhanirrattis ‘’erga mootummaan kun biyya bulchuu eegalee waan jedhamuudha garuu qabatamaan arginee hin beeknu. Kanaafuu abdii irraa hin qabnu’’ jedhan Aab Mikaa’el.
Qaamlee hidhatanii bosona jirantu hidhattoonni mootummaa akka mirga dhala namaa sarbaniif haala mijeessan isa jedhurrattis ‘’mootummaan qaama hidhate sana loluu qaba malee sababa kanaan lammiilee nagaa dararuunsaa qaaniidha’’ jedhan Aab Mikaa’el.
‘’Sababa ilama keetu shanee keessa jira jedhuun abbaa fi haadha ajjeesuun ni mul’ata. Biyya kamittuu mootummaan riphe lolaa haleela malee haalatu naaf mijate jedhee akkamiin uummata lola?
Seera kamtu iyyama? Kanaaf eenyuyyuu dhiittaa mirga namaa haa gaggeessu, mootummaadha kan gaafachuu qabu. Amma garuu mootummaan ofumaa raawwataa jira.’’ Jedhan.
Aab Nageessaa Oddoo Duubee gamasaaniin ‘’qaamni nageenyaa mootummaa akka badii raawwatuuf haala mijeessuu jechuun fakkeenyaaf qaamoleen hidhatan kunneen bakka namni walitti heddummaatee jiru keessa dhokachuun boombii gara qaamolee nageenyaatti darbatu. Yeroo kana qaamoleen nageenyaa dhukaasuu eegalu, gidduu kanatti namni nagaa ajjeefama,haala mijeessuu jechuun isa kana’’ jedhan.
Garuu jedhan Aab Nageessaan qaamoleen WBO ofiin jedhanii bosona jiran mataansaanii mootummaa caalaa uumata ajjeesaniiru jedha.
‘’Waggoota lamaan darban keessa qofa nama 700 ajjeesuu isaanii raga harkaa qabna.Nama ukkaamsuu fi dubartoota gudeeduutu jira, qabeenya barbaadeessuu fi nama hiraarsuun tureera’’ jedhan.
”Ilma keenya fuudhaaf qophaa’aa turetu nu duraa ajjeefame”
ABO fi waraanni bosona jiru hidhata qabuu?
Waraanni Bilisummaa Oromoo amma bosonatti hafee jiru ABO waliin hidhata qabaachuu shakkina kan jedhan Aab Nageessaan,’’hooggansuma isin waliin turetu amma bosona seenee hoogganaa jira.’’ Jedhan.
Suuraa fi viidiyoon gocha suukanneessaa humnoota nageenyaa mootummaatiin akka waan raawwatameetti agarsiifaman hawaasa burjaajessuu kan dubbatan Aab Nageessaan mootummaan kan hunda jala deemee deebii kennaa hin oolu jedhan.
Akka fakkeenyaatti dhiyeenya Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo magaalaa Muggiitti kana haadhaa fi abbaa ilmi keessan shaneedha jedhamuun ajjeefaman kan kaasnee gaafanne Aab Nageessaan,’’sana qaama mootummaa achi jirutu beeka. An sana quba hin qabu. Waanti kun poolisii ilaallata.
Akka waajjira keenyaatti eeruun hawaasaa yoo nu ga’e qorannee seeraaf dhiyeessina’’ jedhan.
‘’Qaamni mootummaa yakka kana raawwatu yoo mootummaa kana keessattillee gaafatamuu baate mootummaa biraa keessatti gaafatamuunsaa hin hafu’’
Isa ABOn waraana bosona jiru waliin ammallee hidhata qaba jedhameef Obbo Mikaa’el,’’waraana keenya galchuuf mootummaa caalaa nutu fedhii qaba ture. Ammas waraanni hafe galee akka nagana bu’u fedhii qabna. Garuu mootummaatu ‘shira xaxee’ akka hin galle godhe.
ABOn waraana alaa waan qabuuf nu waraanaa jira jedhanii ittiin nu hadheessuuf akka waraanni bosonaa gumaayee hin galle godhan.’’ Jedhan.
Nuti ifaan ifatti waraana akka bosonaa hin qabnu jennee ibsineerra kan jedhan Aab Mikaa’el ammas mootummaan yoo dhuguma fedhii nageenyaa qabaate waraana hafe galchee nagana bu’uu danda’a kan jedhan Aab Mikaa’el fedhii sanatu mootummaa bira hin jiru jedhan.
Akkamiin nageenyi bu’a?
Mootummaan kun gadaasayyuu fixate jira kan jedhan Aab Mikaa’el,’’baatii Fulbaanaa dhufu booda gadaansaa hin jiru. Kanaafuu furmaati kan ta’u humnoonni siyaasaa biyya kanaa waliin mari’atanii waliin mala dhahuu qabu.’’ Jedhan.
‘’Rakkoon biyya kanaa rakkoo seeraa yookiin rakoo nageenyaa osoo hin taane rakkoo siyaasaati. Uummanni mirga siyaasaa waan dhabeef furmaanni siyaasaa dhufuu qaba. Yaadni qaamolee siyaasaa hundaa fudhatamee biyya kana gara filannoo gaggeessuu qabna.’’ Jedhan.
Jijjiirama kana kan fide qabsoo uummataati kan jedhan Aab Mikaa’el,’’mootummaan kun isa carraa qabsoo uummataatti fayyadamanii aangoo qabatan akka waan uummanni filateetti fudhatee waan kaleessaa dagateera. Kunimmoo gara hamaatti deema,’’ jedhan.
Kanaafuu marii fi nagaadhaan malee waanti humnaan furamu tokkollee biyya kana keessa hin jiru jedhan Aab Mikaa’el.
Aab Nageessaan gamasaaniitiin haga gara aangoo mootummaatti dhufanitti namni seeraan ala akka hin hidhamnee fi hin adabamne hojjechaa jirra jedhan.
Garuu kun gumaata karaa mootummaa qofaan waan hin milkoofneef lammiin hundinuu akka mirgi namoomaa hin sarbamne gargaaruu qaba jedhan.
Warri ABO’s ta’u yakka mootummaan raawwateera jedhame malee kan hidhattoonni raawwatan wayita balaaleffatan hin arginu kan jedhan Aab Nageessaan kun immoo hojii olaantummaa seeraafi mirga lammiilee kabachisuuf hojjennu boodatti harkisa jedhan.
‘’An akka mootummaatti osoo hin taane akka nama dhuunfaatti wayitan yaada kiyya kennu mootummaan nagayaa buusuuf carraaquu qaba. Karaa nagana haasayanii gara nagayaatti osoo fidanii dansa. Dantaa uummata keenyaa kabachiisuuf waan danda’ame hunda gochuu qabna.’’
Mormiin jibba sanyummaa torbee darbe addunyaa waliin gahee, magaalota hedduu keessatti siidaawwan jibba sanyumma dhaadhessu jedhaman diigamaa turani.
Eessatti maaltu ta’e?
Viidiyoo gabaabduu kanaan isinii qindeessinee jirra. Dhiyaadhaa!
WBO boosona loola diinaa Aniimo magaalaadhan diinaa loola kanuma muramte!